यौन जीवन सुन्दर बनाउन महिला र पुरुषले के-के गर्ने ? | HimalDarpan
अधिकांश मानिस यौन चिकित्सक अथाव थेरापिस्टलाई दुई प्रश्न सोध्ने गर्छन् । पहिलो – यौन जीवनलाई कसरी सुन्दर बनाउन सकिन्छ ? अर्को – कसरी लामो समयसम्म यौन सम्पर्क कायम राख्न अथवा उत्तेजित रहन सकिन्छ ? यस्तोमा आफ्नो यौन जीवन रोमाञ्चक होस् भन्ने चाहने हो भने निम्नलिखित कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
आराम गर्नाले र आनन्दले निदाउनाले शरीरमा इनर्जीको लेभल त बढाउँछ नै । यसले यौन जीवनमा पनि सहयोग पुर्याउँछ । स्वस्थ यौन जीवनको लागि स्वस्थ जीवन र आरामको पनि निकै आवश्यकता हुन्छ । यसको लागि दैनिक ७–८ घण्टा अनिवार्य सुत्नुपर्छ । अचेल मानिसहरु दैनिक घण्टौं ग्याजेट्समा झुम्मिने भएकाले आरामको समय निकै घट्दै गएको छ जसको प्रत्यक्ष असर मानिसको स्वास्थ्य र यौन जीवनमा परिरहेको छ । त्यसैले आफ्नो बानी सुधारेर पर्याप्त मात्रामा आराम गर्नुपर्छ । अन्यथा मानिसमा मानसिक विकार, थकान, तनाव आदि बढ्न सक्छ र पर्याप्त यौन आनन्द लिन सकिँदैन । -kharibot
बुन्डेस लिगा: अर्मानिया बेलफ्रिडमाथि लेइपजिगको १० गोलको जित, बार्यन म्युनिखसँग अंक दूरी कम
बुन्डेसलिगा: बायर्न म्युनिख फ्रान्कफर्टसँग २-१ गोल अन्तरले पराजित…
बार्सिलोना विश्वकै धनी क्लब